पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्ने | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्ने
पुस ११, २०७७ | आजको अर्थ
विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि २०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरियो । भूकम्प अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ गरी ३२ जिल्लाका निजी आवास, सांस्कृतिक धरोहर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक र खानेपानी संरचनालगायत पुनःनिर्माणको चुनौती प्राधिकरणसँग थियो ।
प्रश्न : ग्रामीण क्षेत्रको पुनःनिर्माणले गति लिए पनि शहरी क्षेत्रमा ढिलाइ हुनुको कारण के हो रुयसलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरणले के गरेको छ ?
प्रश्न: चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निजी आवास पुनःनिर्माण सक्नेगरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । नसक्नेलाई अब के हुन्छ ?
उत्तर : प्राधिकरणले पाँच वर्षको अवधि दिएको २०७२ मै सम्झौता गरे पनि घर बनाएको छैन, अब पर्खने कुरा हुँदैन । सात लाख ९६ हजार २४५ लाभग्राही ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिए । अब उनीहरुले घर बनाउन थाल्नुप¥यो ।
उत्तर : घर बनाउन अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने अर्को स्थानमा घर भएका लाभग्राही हुन् । घर नभएर पनि अनुदान सम्झौता गरेर बसेकाले पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता लिएर पुनःनिर्माण शुरु गर्नुपर्छ । गाउँको घर भत्केर सदरमुकाम वा काठमाडौँको घरमा बस्नेले घर बनाएका छैनन् । आगामी पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छ ।
प्रश्न : अर्को स्थानमा घर भएपनि झुक्याएर अनुदान लिई घर बनाएकालाई के हुन्छ :?
उत्तर : छानविन हुन्छ । यसअघि छ लाख बढीले प्राधिकरणमा गुनासो गरे । जनताले कर तिरेको पैसा दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ । साँच्चिकै पाउनुपर्ने छुटेको भए पुनरावेदनको व्यवस्था छ । उच्च अदालतका न्यायाधिशको अध्यक्षतामा रहेको पुनरावेदन समितिले यसको निर्णय गर्छ । हाल धेरैले पैसा फिर्ता गर्न थालेका छन् ।
प्रश्न : निजी आवास पुनःनिर्माणमा पछिल्लो समयमा के समस्या छ ?
उत्तर : धेरै समस्या समाधान गरेका छौँ । ऐलानीलगायत जग्गा समस्या समाधान भएको छ । बस्ती स्थानान्तरण आर्थिक उपार्जन हुनेगरी गरिएको छ । दुई सय ९९ बस्तीका चार हजार ७२० परिवारलाई बस्ती स्थानान्तरण सुनिश्चित गरिएको छ । भूमिहीन लाभग्राही १२ हजार ७८८ को समस्या समाधान भई घर बन्ने सुनिश्चित भएको छ । एक सय ३० एकीकृत बस्ती बन्दैछन् ।
प्रश्न : पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माणमा स्थानीय समुदायलाई आकर्षित गरिएन भन्ने गुनासो छ नि ?
उत्तर : पुरातात्विक सम्पदा पुरानैस्वरुपमा गुणस्तर उही हुनेगरी बनाउनुपर्छ । खरीद कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिबाट रु १० करोडसम्म खर्च गरेर सम्पदा पुनःनिर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रु एक करोडसम्म मात्र पाइने व्यवस्था थियो । प्राधिकरणले यथेष्टरुपमा सम्बोधन गरेको छ । जापान, भारतलगायत देशका सरकारबाट प्राप्त अनुदानसमेत उपभोक्ता समितिमार्फत काम शुरु गरिएको छ । नेपाल सरकारमात्र होइन दातृ निकायको काम पनि उपभोक्ता समितिमार्फत भएको छ ।
उत्तर : निजी आवास पुनःनिर्माणमा स्रोत अभाव हुन दिएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट ठूलो बजेट आउने प्रतिबद्धता थियो । ४१० अर्ब आउने कुरा थियो । राहत र उद्धारकोसमेत यसमा रहेकाले अबको स्रोत रु २९४ अर्ब आउने हो । यसमा रु २३८ अर्ब सुनिश्चित गरिएको छ ।
प्रश्न : ग्रामीण भेगमा भूकम्पले भत्किएका विद्यालयका आकर्षक भवन पुनःनिर्माण भएका छन्, तर शौचालय भने छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ । के शौचालय नबनाउने नै नीति प्राधिकरणले बनाएको हो ?
उत्तर : यस्तै गुनासो आएपछि शौचालय र खानेपानी संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु सात अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको छ चालू आर्थिक वर्षमा । पुनःनिर्माण भएका सबै विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा छात्र एवं छात्राको अलग्गै शौचालय र खानेपानी पु¥याउने विषयलाई प्राधिकरणले अभियानका रुपमा अघि लैजाँदैछ ।
प्रश्न : स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणमा जग्गाको समस्या देखिएको छ रु यसलाई प्राधिकरणले कसरी समाधान गर्छ ?
उत्तर : स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरेका छौँ । यस वर्ष स्वास्थ्य संस्थाका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरी पुनःनिर्माण गर्ने तयारीमा छौँ । स्थानीय सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गर्नेछन् । विद्यालय पुनःनिर्माणमा स्थानीय तहले नै जग्गा व्यवस्थापन गर्नेछन् । एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६९८ पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ ।
उत्तर : सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सिंहदरबार, धरहरालगायत संरचना पुनःनिर्माण भइरहेका छन् । सिंहदरबारमै ३०० जना कामदारले नियमितरुपमा काम गरिरहेका छन् । आगामी असारसम्ममात्र प्राधिकरणअन्तर्गत पुनःनिर्माणका काम गरिन्छ । साउनपछि लेखापरीक्षण, स्रेस्ता अन्तिम रुप दिइ सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण, अभिलेखीकरण गर्ने काम हुन्छ ।
प्रश्न : भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका अनुभव एवं सिकाइ कसरी अभिलेखीकरण गरिन्छ ?
उत्तर : अभिलेखीकरण गर्ने काम बृहत्तररुपमा अघि बढेको छ । यसका लागि १०० वटा अनुसन्धान पत्र छ । पुनःनिर्माणमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको अनुभव भएका व्यक्तिले समेत अनुसन्धानपत्र लेख्नुभएको छ । यस्ता अनुसन्धानपत्र २५ वटा अन्तरराष्ट्रियस्तरका जर्नलमा प्रकाशित गर्न लागिएको छ । पुनःनिर्माणको यो अनुभवलाई संस्थागत रुपमा अभिलेखबद्ध गर्न लागिएको छ ।
प्रश्न: बेला बेलामा हुने नेतृत्व परिवर्तनबीच यहाँले लामो समय प्राधिकरण हाँक्नुभयो रु त्यसबीचमा कस्ता कस्ता अनुभव प्राप्त भए ?
उत्तर : यी अनुभव समेटेर मैले कुनै बेला पुस्तक लेख्नेछु । धेरै कथा, व्यथा छ । धैर्यता र लगनशीलताले परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ । भूमिहीन, गुठी समस्या भएका लाभग्राहीका समस्या कानून परिवर्तन गरेर गरिएको छ ।